Bashiir Axmed Makhtal, Soomaali haysta dhalasho Canada ah oo ay maxkamadi ku heshay dambi lagu soo oogay, loona badinayo in dil lagu xukumo. [Akhris …] – Radio Daljir
Bashiir Axmed Makhtal, Soomaali haysta dhalasho Canada ah oo ay maxkamadi ku heshay dambi lagu soo oogay, loona badinayo in dil lagu xukumo. [Akhris …]
Adis Ababa, July 27 – Nin Soomaali ah oo haysta dhalashada Canada ayaa maanta ay maxkamad ku taala Itoobiya ay la xidhiidhisay falal argagixiso, kuna cadaysay dambiga lagu soo oogay.
Maxkamad ku taalla magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay nin Soomaali ah oo haysta dhalashada waddanka Kanada.
Bashiir Axmed Makhtal oo ay imika da?diisu tahay 36 jir, ayaa loo badinayaa in toogaasho lagu xukumo, sida ay maanta ku dhawaaqday maxkamadii ugu dambaysay ee dacwaddiisa Addis Ababa ku dhagaysatay.
Bashiir waxa uu ka mid ahaa kutlad dad ah oo kala dhalashooyin duwan oo Disember 2006-da laga qabtay soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, xilligaas oo guluf milatari oo ay Itoobiya qaadday lagu jabiyaya maxkamadihii islaamiga ee xilligaas badhtamaha iyo koonfurta Soomaaliya gacanta ku hayay.
Ninkan Soomaali Kanadiyanka ah waxaa ay maxkamaddii maanta dacwaddiisa ugu dambaysay go?aanka ka gaadhay ay ku qiratay saddex caddaymood oo ah in uu ka mid ahaa urur argagixiso.
Bashiir Makhtal waxa uu ku dhashay bariga Itoobiya ee ay Soomaalidu deggan yihiin, waxana uu dalka Soomaaliya yimi isagoo 11 jir ah, horraantii sagaashameeyada markii ay dagaallada sokeeye ka qarxeen Soomaaliya waxa uu Bashiir u qaxay waddanka Kanada, sannadkii 1994 tiina waxa uu qaatay dhalashad waddanka Kanada.
Bashiir Axmed Makhtal waxa uu wax ku bartay, kana shaqeeyey magaalada Toronto ee waddanka Kanada, sanadkii 2001-dana waxa uu tagay waddanka Kenya halkaas oo uu ka unkay ka ganacsiga dharka la soo isticmaalo, kuwaasoo uu badiyaa u qaadi jiray koonfurta Soomaaliya, waxana uu taageerey intii uu Soomaaliya joogay dabayaaqadii 2006-da maxkamadihii islaamiga ahaa, waxana uu ka soo horjeestay faragalin ay Itoobiya ku wajahado Soomaaliya.
Bishii Disember ee 2006-dii waxa uu Bashiir Axmed Makhtal ku jiray 41 qof oo dhalashooyin kala duwan haysta oo laga qabtay soohdinta ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya, kuwaas oo gebigood loo dhiibay dowladda Itoobiya.